Fekradaha Somali Links Contact Us Barabogaankii Shabaab Baydhabaa Beenisay
Gabyaa Kulan Xasan Jurun wuxuu yiri “Geeridoon wax dilin ee ninkii go’ay u booyeysa… Nin cibaado gaarey iyo ninkii gabayahow sheega”.
Waxaan la fajacay oo aan xalayto ka seexan waayey sababta Kooxda AL Shabaab ay u toogteen kumanyaal Soomaaliyeed oo ay ku jiraan in ka badan 30 Sarkaal oo ah xulka beesha degta Galgaduud oo sida la ogsoon yahay maal iyo muruqba hagar la’aan u taageertay halganka xarakada Islaamka. Kumanyaalka la diley waxaa lagu sheegay MURTADIIN dilkoodu shareecada ku bannaan yahay maadaama ay la shaqeeyaan ama taageeree TFG. Taas beddelkeeda 26/01/2009 goortii Al Shabaab qabsaday Baydhabo waxaa la sharfay oo diyaarad looga qaaday Waajid madaxdii TFG ee gobolka Bay oo ay ku jiraan (Wasiiro, Xildhibaano & Barasaab). Dembileyaasha la sii daayey waxaa ugu horreeya Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ah dagaal-ooge kaalin firfircoon ka qaatay burburkii qaranka isla markaana hormood ka ahaa Kooxdii dalka soo gelisay ciidammada Xabashida. Al Shabaab qabyaalad ma yaqaan oo waa dhallinyaro dar-Alle iyo diin jacayl ku midowday, fekraddaasi dabeyshey raacday oo waxaa beeniyey sii-deyntii Xaabsade. Marinhabaabintii Baydhabo ka dhacday waxay ahayd “Barakaat ka qaado oo Barakaat u dhiibo”
Haddaba su’aashu waxay tahay, hadafka Shabaab xagee ku wajahan yahay? Hirgelintii shareecada iyo caddaaladdii lagu sugayey xagee bey ku dambeysay? Jihaadka Shabaab ku dhawaaqay ma Islaamnimo buu cuskan yahay mise waa dabargoynta reer Banaandir? Muslimiinta lagu sunto Murtadiinta ee lagu xukumo Gaalo dhiigoodu shareecada ku bannaan yahay, xagee laga soo minguuriyey oo ay “Asleynka = Qur’aanka & Axaadiista” uga qoran tahay? Amiirka Al Shabaab (Sh. Muqtaar abu Zuber) waa reer Hargeysa, dadweynaha ku nool Woqooyi 30% waa Itoobiyaan ee maxaa jihaadka loo gaarsiin waayey gobollada Woqooyi? Addeegga bulshada reer Banaadir (waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga, xirfadaha iwm) in la burburiyo isla markaana adeegga bulshada gobollada Woqooyi la hormariyo, ma caddaalad baa? Mise waa doqonnimo reer Banaadir la degtay? In Banaadir la burburiyo oo haybadda caasimadda laga qaado yey dani ugu jirtaa? Hargeysa iyo Baydhabo teebaa noqon karta caasimada Somaaliweyn ka dhexeysa? Dhulka u dhexeeya Gaalkacyo ilaa Kismaayo kaliya miyaa Soomaali ka dhexeeya? Gobollada kalena beel beel baa loo leeyahay miyaa? Soomaliya ma Soomaali baa iska leh mise waa goob Muslimiinta oo dhan ka dhexeysa? Soomaalida maanta ee dhabarka ka jabtay ma leedahay awood ay shareecada ugu hirgeliso Ameerika? Ragga yiri shareecada ayaan gaarsiineynaa Alaska, yey u baaqayaan? Kuruus Miisayliska“cruise missiles” maraakiibta xeebaha joogta iyo bombooyinka diyaaradaha “B52 & AC130” miyey doonayaan in lagu xasuuqo maatada tabaaleysan? Mise ciidanka Xabashidu inuu dib u soo laabto oo warshada Baastada markale dego? Haween dhul xaaqaya in BAM lagu qarxiyo ma jihaad baa? Hoobiye xaafad laga dhex rido ma jihaad baa? Dhunoo dhaygag wareernee, xagee dhaanka loo raray?
Qalinkii: NuurNasiib Nurnasiib@yahoo.co.uk FG: Maqaalkani wuxuu ka tarjumayaa Aragtida gaarka ah ee Qoraaga ku qoran. Related Items	Abuu Mansuur oo Beeniyey in Al-Shabaab eey ka danbeeysay Waraaqo lagu daadiyey Bakaaro. Dhex dhexaadin iyo Wada hal u bilowday Al-shabaab iyo Maxkamadaha Islaagmiga. Ururka Al-shabaab oo Ku eedeeyey Xasuuqa Dadka Rayidka ah Dowlada KMG isla markaana Qaadacay wax Wadahal ah ineey la galayaan Dowlada KMG. 8 Qof oo eey ku jiraa 3 Sarkaal oo Ururka Al-shabaab Madaxdooda ka mid ah oo ku Geeriyootay Duqeeyntii Mareeykanka ee Dhuusamareeb. Xoogagii Al-shabaab oo maalintii saddaxaad ku jira degmada bardaale iyagoo howlgalo ka wadadaan gudaha degmadaasi. Xoogaga Al-shabaab oo dhaqan galiy go`aano ay ka soo saareen degmada Bardaale ee G/Bay. DEGDEG:Ciidamo ka tirsan xoogaga AL-shabaab oo la wareegay gacan ku heynta degmada baardheere ee G/Gedo. Guddoomiyaha maamulka degmada baardheere Axmed Xirsi Dhudi iyo cutubyadii Al-shabaab oo iminka kulan uga socda guriga guddoomiyaha maamulka degmada baardheere. Xoogaga Al-shabaab oo maalintii Labaad ku sugan degmada baadheere ee gobolka Gedo Xoogaga Al-shabaab oo la wareegay degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo. MOST READ Maydka nin loo gowracay Sida Xoolaha oo kale ayaa saaka la soo dhigay Isgoyska Bakaaraha Muqdisho(Daawo Sawiro Naxdin leh). Views:35611 Daawo Dhegeyso Buraanbur Wadani ah. Views:21000 Somalia: Somaliland and the 'London Conference' - Silanyo Must Challenge Denial of Somaliland's Rights Views:20840 GAALAYSIINTA QAXOOTIGA SOOMAALIDA EE KENYA (WAR-BIXIN). Views:10588 Muuqaalka Soomaaliya Sanadka 2008!!!(Daawo Sawiro badan) Views:9843 cabdibile Views:7976 Soomaalida Finland oo Baaritaan caafimaad oo lacag la´aan ah lagu sameynayo(Warbixin Muhiim ah) Views:7432 LATEST ADDED Shabaab oo Hiiraan ku dishay dad isugu jiraa waayeel iyo caruur. War Saxaafadeed: Maxamed Saalax Anaadif iyo Saacid oo ka hadlay amaanka Mowshinkii ka dhanka ahaa Saacid oo laga laabtay kadib diblamaasiyad adag oo loo Miyiga oo laga bilaabay Cunida dalac Bilaashka & Canjeerada. (Maxaasa Kaqabsaday Arintaas) Xildhibaan muujiyay dareen ah in dadka Kismaayo Qaarkood Shabaab ku biirayaan. Xildhibaanada waday Mowshinka ka dhanka ah Saacid oo ka cawday lacago lagu kala diray. AMISOM oo ka dhawaajisay Qorshe Cusub oo kanixiyay Qaswadayaasha Maamulka Somaliland oo Waji gabax kale kala kulmay M/Yurub Banaanbaxyo kadhan ah Mooshinka Xukuumada oo Muqdisho gil gilay Xildhiban Dhalxa oo kamid ah xildhibanada Mooshinka waday oo kashifay Sir Culus